ESI EMEGHE CSV - ỤDỊ FAỊLỤ - 2019
Mepee usoro CSV
Nsogbu na iji igwefoto eme ihe, na ọtụtụ ihe, na-ebili site na esemokwu nke ngwaọrụ ahụ na ngwanrọ kọmputa. Gini kamera gị nwere ike ịnwe nkwarụ na njikwa ngwaọrụ ma ọ bụ dochie ya ọzọ na ntọala nke a ma ọ bụ usoro ahụ ị na-eji ya. Ọ bụrụ na ị kwenyesiri ike na e debere ihe niile dịka o kwesịrị, gbalịa chọpụta kamera weebụ gị site na iji ọrụ ịntanetị pụrụ iche. N'ọnọdụ ahụ mgbe ụzọ ndị e depụtara na isiokwu adịghị enyere aka, ị ga-achọ maka nsogbu ahụ na ngwaike nke ngwaọrụ ahụ ma ọ bụ ndị ọkwọ ụgbọala ya.
Ido weebụ kamera arụmọrụ
E nwere ọnụọgụ ọtụtụ saịtị nke na-enye ohere ịlele kamera ahụ site na ngwanrọ. Maka ọrụ ndị a n'ịntanetị, ịkwesịrị ịnweta oge ịwụnye ngwanrọ ọkachamara. N'okpuru ebe a bụ ụzọ ndị e gosipụtara na-enweta ntụkwasị obi nke ọtụtụ ndị ọrụ netwọk.
Iji rụọ ọrụ nke ọma na saịtị ndị a kpọtụrụ aha, anyị na-akwado ịwụnye mbipute kachasị ọhụrụ nke Adobe Flash Player.
Hụkwa: Otu esi melite Adobe Flash Player
Usoro 1: Webcam & Mic Test
Otu n'ime ọrụ kachasị mma ma dị mfe maka ịlele igwefoto weebụ na igwe okwu ya n'igwe. Ntugharị dị mfe nke dị na saịtị ahụ na opekempe nke bọtịnụ - niile iji jiri saịtị ahụ wetara ihe a chọrọ.
Gaa na Webcam & Mic Test
Mgbe ị gara na saịtị ahụ, pịa bọtịnụ isi n'etiti etiti window. "Lelee kamera weebụ".
Anyị na-ekwe ka ọrụ ahụ jiri kamera weebụ n'oge eji ya eme ihe, pịa "Kwe ka" na windo na-egosi.
Ọ bụrụ na, mgbe ikikere iji ngwaọrụ ahụ, ihe oyiyi si na kamera weebụ gosipụtara, ọ na-arụ ọrụ. Window a dị ka nke a:
Kama obere nwa, ị ga-enwe ihe oyiyi si na kamera weebụ gị.
Usoro 2: Webcamtest
Ọrụ dị mfe ịlele arụmọrụ nke kamera na igwe. Ọ na-enye gị ohere ịlele ma vidiyo na ọdịyo site na ngwaọrụ gị. Tụkwasị na nke ahụ, ule Webcam na-egosi na oghere aka ekpe nke windo ọnụ ọgụgụ nke okpokolo agba kwa nkeji oge a na-akpọ vidio ahụ.
Gaa na ọrụ Webcamtest
Gaa na saịtị ahụ na nso akwụkwọ ahụ "Pịa iji mee ka Adobe Flash Player ngwa mgbakwunye pịa ebe ọ bụla na window.
Na saịtị ahụ ga-ajụ gị maka ikikere iji Flash Player ngwa mgbakwunye. Kwado ihe a na bọtịnụ "Kwe ka" na windo na-egosi na akuku aka ekpe.
Mgbe ahụ, saịtị ahụ ga-achọ ikikere iji kamera weebụ gị. Pịa bọtịnụ ahụ "Kwe ka" na-aga n'ihu.
Kwado nke a maka Flash Player site na ịpị bọtịnụ nke gosipụtara ọzọ. "Kwe ka".
Ya mere, mgbe saịtị na onye ọkpụkpọ ahụ nyere gị ikikere ịlele igwefoto, ihe oyiyi si na ngwaọrụ ga-apụta yana uru nke okpokolo agba kwa nke abụọ.
Usoro 3: Toolster
Toolster bụ saịtị maka ịnwale ọ bụghị naanị kamera weebụ, kamakwa ọrụ ndị ọzọ bara uru na ngwaọrụ kọmputa. Otú ọ dị, ọ na-ejikwa ọrụ anyị. N'ime usoro nkwenye ahụ, ị ​​ga-achọpụta ma akara vidiyo na igwefoto kamera dị mma.
Gaa na ọrụ Toolster
Dị ka ụzọ gara aga, pịa na windo dị n'etiti etiti ahụ iji malite iji Flash Player.
Na windo na-egosi, ka saịtị ahụ na-agba ọsọ Flash Player - pịa "Kwe ka".
Na saịtị ahụ ga-achọ ikikere ka ijiri igwefoto, nye ya aka site na bọtịnụ kwesịrị ekwesị.
Anyị na-eme otu ihe ahụ na Flash Player, anyị na-ekwekwa ka eji ya.
A windo ga-apụta na ihe oyiyi nke na-ewepu na igwefoto. Ọ bụrụ na e nwere vidio na ihe ọkpụkpọ, ihe ederede ga-apụta n'okpuru. "Weebụ weebụ gị na-arụ ọrụ nke ọma!", na nso nsoro "Video" ma "Ụda" A ga-eji akara akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ dochie obe.
Usoro 4: Online Mic Test
A na-ebute saịtị ahụ iji chọpụta igwe okwu nke kọmputa gị, ma ọ nwere ọrụ nyocha nke kamera. N'otu oge ahụ, ọ naghị arịọ ka ikikere iji Adobe Flash Player ngwa mgbakwunye, ma na-amalite ozugbo na nyochaa nke kamera ọrụ.
Gaa na ọrụ ntanetị nke Online Mic test
Ozugbo ị gara na saịtị ahụ, windo na-egosi na ị rịọrọ maka ikikere iji kamera weebụ. Kwadoro site na ịpị bọtịnụ kwesịrị ekwesị.
Obere windo ga-apụta na akuku aka nri ya na ihe oyiyi e si na igwefoto. Ọ bụrụ na ọ bụghị, mgbe ahụ ngwaọrụ anaghị arụ ọrụ n'ụzọ ziri ezi. Uru dị na windo na foto ahụ na-egosi ọnụ ọgụgụ nke okpokolo agba na oge a kara aka.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ọ dịghị ihe siri ike iji ọrụ ịntanetị maka ịlele kamera. Ọtụtụ saịtị na-egosi ozi ndị ọzọ, na mgbakwunye na igosipụta ihe oyiyi sitere na ngwaọrụ ahụ. Ọ bụrụ na ị na-eche nsogbu nke enweghị mgbaàmà vidiyo, ọ ga-abụ na ị nwere nsogbu na ngwanrọ nke kamera ma ọ bụ na ndị ọkwọ ụgbọala arụnyere.